Ungayisebenzisa kanjani iTubi TV - Tubi.tv/Activate (Register) - Ezokuzijabulisa
Izinhlelo zokusebenza zokusakaza zisempini engapheli yokunikeza okuqukethwe okuhle kakhulu kanye nesipiliyoni somsebenzisi. Kodwa-ke, iningi labo linesevisi ehlukile engalingisi i-TV eyiqiniso. I-Cable TV iyehla kancane, kepha kunezinkampani ezithile ezisasebenza ukukunikeza ulwazi olufana ne-TV.
Ukuletha i-TV kumadivayisi akho ahlakaniphile, iTubi TV ingelinye lamapulatifomu amangalisayo. Ngaphandle kokubhalisa, ungasakaza imibukiso eminingi ye-TV nama-movie Usathola izikhangiso ezifana nethelevishini. Noma kunjalo, unokulawula okuphelele kokuqukethwe okusakazayo. U-Ergo, asikho isikhathi esinqunyelwe ekusakazweni kokuqukethwe.
Okubaluleke kakhulu, konke kumahhala! Ngakho-ke ungayisebenzisa kanjani iTubi TV? Kuyinqubo eqondile! Ake sibheke ukuthi iyini iTubi TV nokuthi ungayisebenzisa kanjani ukuze uthole okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu:
Yini iTubi TV?
I-Tubi TV wuhlelo lokusebenza oluvela kuFox olukulethela ubuqiniso nokungcebeleka kwe-cable TV ocingweni lwakho. Kusho ukuthini? Ngenkathi ezinye izinkampani zisebenza ukuhlinzeka ngezinhlelo zokusebenza ezizwakala ‘njengezinhlelo zokusebenza,’ iTubi TV izwakala njenge-TV ocingweni lwakho.
Abanye abahlinzeki basebenza ekunikezeni okuqukethwe ngemali yokubhalisile. Ngokubambisana, lokhu kungaholela ezindlekweni eziningi. Kodwa-ke, iTubiTV iyihabhu elilodwa elineqoqo elikhulu lemidlalo ye-TV namabhayisikobho. Izindaba ezinhle kakhulu? Konke okuqukethwe kutholakala mahhala.
Yini iTubi TV Enikezayo?
I-Tubi ine-interface esisebenziseka kalula ukuthi ngokuvula uhlelo lokusebenza noma ngokuya ku-Tubitv.com, ungachofoza ku-‘qala ukubuka ’bese uqala ukusakaza uhlelo lokusebenza ngokushesha. Kukhona iqoqo lama-movie angaphezu kuka-20 000 nochungechunge lwe-TV ongasakaza mahhala. Hhayi imibukiso ye-TV namabhayisikobho kuphela, futhi uthola ukufinyelela emakhathuni athandwayo.
Ihlanganyele nezinkampani zokukhiqiza eziningana ezihlonishwayo njengeParamount, MGM, Warner Bros, neLionsgate ukukulethela okuqukethwe kwasekuqaleni kanye ne-premium ngaphandle kwezindleko. Kepha umbuzo uwukuthi, ikulethela kanjani lokhu okuqukethwe mahhala?
Isikhangiso KuTubi TV - Ingabe Kukhona Okubhaliselwe?
Ukukulethela okuqukethwe mahhala, iTubi TV isakaza izikhangiso. Yileyo ndlela abahlanganyela ngayo nabanye abahlinzeki futhi bakhokhela ngokunikeza okuqukethwe. Ngakho-ke, iTubi TV iyipulatifomu esemthethweni ongayilanda kunoma iyiphi idivayisi bese uyisakaza ngaphandle kokukhathazeka ngokomthetho.
Ngeshwa, ukugcina okuqukethwe kukhululekile ngokuphelele futhi kungabi yinkampani egxile ekwenzeni inzuzo, iTubi ayinikeli ukubhaliswa. Ngamanye amagama, ayikho iphakethe lenyanga noma lonyaka ongalithenga eTubi. Ngakho-ke, awukwazi ukuvimba izikhangiso.
Ngamafuphi, izikhangiso yizo ezigcina okuqukethwe kukhululekile futhi kusemthethweni.
Ukuhambisana kweTubi TV:
ITubi itholakala cishe kuwo wonke amapulatifomu. Ungayisebenzisa kuma-Smartphones nakumathebulethi. Isekela i-Android, i-iOS, ne-Roku. Ungasakaza okuqukethwe ku-PC noma kwamanye amadivayisi, futhi. Ngaphezu kwalokho, i-smart TV yakho nayo isebenza nohlelo lokusebenza. Akukhona lokho kuphela! Uma une-console yokudlala, ungayisebenzisa futhi.
Kukonke, iTubi iyahambisana emhlabeni wonke futhi ikulethela kalula ukulanda. Itholakala kuzo zonke izitolo eziku-inthanethi ezidlangile ezifana neGoogle Playstore, i-Apple Store, ne-Samsung Store. Uma kungenjalo, ungavakashela iwebhusayithi esemthethweni ukuyilanda. Ngokufanayo, kusebenza kahle kusiphequluli sakho sewebhu ngaphandle kokuthatha noma yiliphi ithuluzi.
Ukuze usebenzise iTubi TV, ungavakashela https://tubitv.com/ noma landa uhlelo lokusebenza esitolo esisemthethweni online. Nayi inkomba yokulandela:
Vula uhlelo lokusebenza noma iwebhusayithi kusiphequluli
Chofoza ku-‘qala ukubuka, ’futhi kuzokusa emtatsheni wezincwadi
Lapho unenketho yokuphequlula, ukusesha, ukubhalisa nokungena ngemvume
Ungasakaza okuqukethwe ngaphandle kokungena ngemvume ngokuchofoza nje isithonjana sochungechunge lwe-TV noma ama-Movie njengoba ezolayisha
I-interface ikunikeza inketho ku-Chromecast isidlali ku-TV namawashi lapho.
Ungakhetha futhi imibhalo engezansi nekhwalithi yevidiyo. Kukhona okuqukethwe kwe-HD okutholakala mahhala.
Uma ufuna izinsizakalo ezenziwe ngezifiso, ukubhaliswa kuyisinqumo esingcono kakhulu.
Ungayibhalisa kanjani ku-Tubi TV?
Kulula ukubhalisa kuTubi TV. Landela lezi zinyathelo ezilula:
Kukhona inketho yokubhalisa ekhoneni eliphezulu kwesokudla lohlelo lokusebenza. Chofoza kuso.
Ungasebenzisa i-Google noma i-Facebook ukubhalisa ngokuzenzakalela nokungena ngemvume
Ngenye indlela, ungagcwalisa imininingwane bese ubhalisa ngokusebenzisa izindlela ezenziwa ngesandla
Lapho usugcwalise imininingwane nerejista, uzoba yilungu elibhalisiwe
Ngemuva kwalokho ungangena ngemvume usebenzisa i-imeyili nephasiwedi
Izinyathelo Zokusebenzisa i-Tubi TV kudivayisi yakho:
Akudingeki ukuthi ungene ngemvume ukuze usebenzise i-Tubi TV kudivayisi yakho. Kodwa-ke, uma ufuna ukusakaza iTubi TV ku-TV yakho, ungalandela ukwenziwa kwezinyathelo ezimbili.
Landa uhlelo lokusebenza lwe-Tubi TV ku-TV yakho
Vula uhlelo lokusebenza bese uqhafaza ekhaya
Kusuka ekhaya, chofoza u-Sign in
Uhlelo lokusebenza ku-TV luzobonisa ikhodi yokwenza kusebenze
Thayipha ikhodi yokusebenzisa kahle
ITubi TV izosebenza ngaphandle kwenkinga
Viola! Usuqedile ngenqubo yokungena ngemvume. Manje usungasakaza ku-TV yakho ngaphandle kwenkinga.
Okuqukethwe okutholakala ku-Tubi TV kuyiqiniso futhi kwenziwa ngobuchwepheshe. Kunabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-25 emhlabeni jikelele. Ngokusekelwa kumadivayisi angaphezu kwama-25 namandla aphindiwe, unepulatifomu lokuzijabulisa eligcwele onalo.
Uma ungafuni ukuchitha imali eningi ekubhaliseni okuningi noma ikhebula TV, ungasebenzisa uhlelo lokusebenza lweTubi TV. Kodwa-ke, akukuniki okuqukethwe kwamuva. Iningi lokuqukethwe elokuzijabulisa koqobo. Njengoba abanye abahlinzeki bezinsizakalo benezinhlelo zabo zokusebenza, nakanjani kuzodingeka ubhalisele kubo ukuze ufinyelele ochungechungeni nakuma-movie akamuva.
Emncintiswaneni wezinhlelo zokusebenza zokusakazwa ku-inthanethi, iTubi TV imi endaweni ehlukile. Azikho izinhlelo zokusebenza eziningi ezifana nayo. Ngakho-ke, kungaba wengezo elibalulekile eqoqweni lakho. Nge-interface encane kanye nendlela eqondile, futhi kuyisengezo esihle kakhulu kubantu abangaphansi kobuchwepheshe be-tech.
Ungasisebenzisa kanjani isikhathi sokubonisa noma kunini?
I-Chromecast ye-Windows 10
Unhinged 2020 Konke Mayelana nokuziphindiselela
Ifilimu Yasekhaya Yesibili: IDrama Worth Watching